Famaritana ny tahirin-tsakafo ivelany
Ny fiara ivelany dia fiara mafy orina (HDD) na fiara manerantany (SSD) mifandray amin'ny solosaina ety ivelany fa tsy ao anatiny.
Ny sasany mandeha amin'ny rindrankajy sasany dia manovo hery eo amin'ny telegrama nomerika, izay avy hatrany dia avy amin'ny solosaina mihitsy aza, fa ny hafa kosa mety mitaky ny fifandraisana an-dàlam-pifandraisana ahafahana mamoaka herinaratra.
Ny fomba iray hieritreretana ny fiarakodia henjana dia toy ny hoe fiara fitaterana an-tsokosoko matetika, nesorina tao amin'ny fatorany miaro azy, ary nidiran-tserasera.
Ny raki-drivotra anatiny dia mety hovana ho fiarakodia henjana hafa amin'ny alàlan'ny antsoina hoe fitaterana fiara mafy .
Ny fiara mifono vy avy any ivelany dia tonga amin'ny fitambaran'ny tahirin-tsakafo, fa mifandray amin'ny solosaina amin'ny USB , FireWire , eSATA, na wireless.
Ny raki-tsoampaty ivelany dia indraindray antsoina hoe dresaky ny harena sarobidy. Ny fiara flash dia iray mahazatra, ary tena portable, karazana fiara hafa fiarakodia.
Jereo ny mpamily fiarovam-batana tsara indrindra hividianana ny fanampiana hifidy iray.
Nahoana ianao no afaka mampiasa fiara ivelany?
Ny raki-tsoratra ivelany dia mora ampiasaina, mora ampiasaina, ary afaka manome fitambarana be dia be rehefa mila izany. Azonao atao ny mitahiry ny fitaovana mety aminao, izay toerana tianao, ary mitondra rakitra maromaro miaraka aminao na aiza na aiza alehanao.
Ny tombontsoa iray hafa amin'ny an'ny fiarakodia ivelany dia ny ahafahanao manosika azy ireo amin'ny solosaina ho solosaina ary mahatonga azy ireo ho tsara mba hizarana rakitra lehibe.
Noho ny habetsahany fitehirizana matetika (matetika ao amin'ny terabytes ) dia ampiasaina matetika matetika ny fampiasana raki-drivotra havanana amin'ny famahanana rakitra. Mazàna ny mampiasa programa backup ahafahana mamorona zavatra toy ny mozika, horonan-tsary, na sary famoriam-bola ho an'ny fiara ivelany ho an'ny fitazonana azo antoka, misaraka amin'ny loharano raha toa ka tsy novaina na nesorina izy ireo.
Na dia tsy ampiasaina amin'ny tanjon'ny backup aza dia mampandeha fomba mora hanitatra ny tahiry misy anao ny solosaina mafy ivelany, nefa tsy voatery manokatra ny solosainao , izay tena sarotra raha mampiasa ny solosaina findainao.
Ny rindrambaiko ivelany dia azo ampiasaina ihany koa mba hanomezana fitehirizana fanampiny amin'ny tambajotra iray manontolo (na dia matetika aza matetika ny fisidinan'ny fiara ao anatin'ireny sehatra ireny). Ireo karazana fitaovam-pandrafetana ireo dia azo alaina avy amin'ny mpisera maro aty ary matetika dia toy ny fomba ahafahan'ny mpampiasa mizara rakitra ao anaty tambajotra mba tsy handefa mailaka na hampiakarana ny angona an-tserasera.
Mampidi-doza ny fiarovana ivelany
Ny raki-drivotra anatiny dia mifandray mivantana amin'ny reny , fa ireo fitaovana fitehirizana avy any ivelany dia mihazakazaka manoloana ny tranga ivelan'ny solosaina , ary avy eo mivantana amin'ny rindrankajy.
Ny rafitra fampiasana sy rindrambaiko fametrahana rindrambaiko dia aseho amin'ny ankapobeny amin'ny rindranasa anatiny, raha toa ka ampiasaina amin'ny antotan-drakitra tsy misy solosaina toy ny sary, horonan-tsary, tahirin-kevitra ary rakitra amin'ireny karazana ireny.
Ny raki-tsoratra anatiny dia manovo hery avy amin'ny famatsiana herinaratra ao anaty ordinatera. Ny rindrambaiko hentitra dia ampiasaina na amin'ny alalan'ny tariby misy azy ireo na amin'ny alàlan'ny AC.
Ny data dia mety ho simba mora kokoa raha voatahiry ao anaty fiara hafa izy satria eo amin'ny birao na latabatra izy ireo matetika, mahatonga azy ireo ho mora entina sy hangalatra. Tsy mitovy amin'ny fiara mafy orina entina haka ny ordinatera manontolo, na ny fiara sarotra alaina avy ao anatiny, alohan'ny ahafahan'ny olona mahazo fidirana amin'ny rakitrao.
Ny fihoaram-pefy mahery fihodinana dia matetika no mihetsiketsika kokoa noho ny ao anatiny, ka mahatonga azy ireo ho mora kokoa noho ny fahavoazana ara-mekanika. Ireo fiara mifototra amin'ny SSD, toy ny fitifirana flash, dia ambany noho ny fahasimbana toy izany.
Inona no atao hoe State State Drive (SSD)? mba hianatra bebe kokoa momba ny fahasamihafana eo amin'ny HDD sy SSD.
Soso-kevitra: Jereo ny fomba fananganana fiara Hard Drive ao ivelany raha toa ka mila "manova" ny fiara anatiny ao anaty fiara hafa ianao.
Ahoana ny fomba fampiasana fiara sarotra ivelany
Ny fampiasana fiara havanana ho an'ny hafa dia mora tahaka ny fametahana ny faran'ny tambajotran-drakitra ao anaty fiara ary koa amin'ny endriny mifanohitra amin'ny solosaina, toy ny port USB ho an'ny solosaina USB mifototra. Raha ilaina ny fehezan-kery herinaratra, dia mila ampidirina ao anaty rindrina.
Amin'ny ankapobeny, amin'ny ankamaroan'ny ordinatera dia mila fotoana fohy fotsiny vao hivoaka ny ao anatin'ny rindran-damina ivelany eo amin'ny efijery, amin'izay dia azonao atao ny manomboka manetsika ny rakitra mankany amin'ny sy ny drive.
Raha mikasika ny sehatry ny rindrambaiko, dia azonao ampiasaina ny fiara havanana ho an'ny hafa dia saika mitovy amin'ny fomba iray ho anao anatiny. Ny hany fahasamihafana dia ny fomba ahazoanao miditra amin'ilay fiara ao amin'ny rafitra fiasanao.
Satria ny ankamaroan'ny ordinateran'ny solosaina dia manana fiara tokana iray izay manjary voalohany indrindra, "main" drive, tsy manakorontana ny manindry eo an-dàlana mankany amin'ny fiara mafy hamonjy rakitra, kopia rakitra avy amin'ny folder iray mankany amin'ny hafa , esory ny angona, etc.
Na izany aza, misy fiara mafy orina hafa miseho ho toy ny fiarakodia havanana faharoa ary azo jerena amin'ny endrika hafa kely. Amin'ny Windows, ohatra, ny rindranasa ivelany dia voatahiry manaraka ireo fitaovana hafa ao amin'ny Windows Explorer sy Disk Management .
Fanafarana fiasa mahazaka fiasa ivelany
Araho ireo rohy ireo raha mila fanampiana ianao hanao ny iray amin'ireo asa ireo amin'ny alalan'ny fitaovana ivelan'ny fitaovanao:
Andramo ny fiara sarotra ivelany
Hanova ny Taratasy Hard Drive Aterineto
Ampiasao ny fiara sarotra ivelany
Esory ny fiara sarotra ivelany
Mizara fiara sarotra ivelany
Inona ny lisitry ny Windows Hardware Compatibility?
Fomba fiasan'ny Advanced Boot Options
Inona avy ny fanitarana ny rakitra?
Inona no fomba fiasa NZSIT 402?
HKEY_LOCAL_MACHINE (halefa any HKLM)
Inona no Software 64 Bit?
Inona no USB 1.1?
Fomba 4 hamahana olana amin'ny iTunes
Mamorona bokikely izay mamaritra toerana na fandaminana iray
8 Tips mba hahazo ny rindrambaiko ankatoavin'ny Apple App Store
Ahoana ny fametrahana Wi-Fi amin'ny DSi
5 Fitiavanao an-tserasera amin'ny sainam-pirenena tsy tokony hiraharaha
Ahoana no Fandefasana Lalao amin'ny Nintendo DSi Shop
Inona no atao hoe fiarovana?
Torlock: Fifanakalozan-kevitra amin'i Jack the Administrator P2P
9 Fanomezana an-tsompitra an-tserasera
Safidy High Definition (HD) ho an'ny Digital Video Recording
Tsy Ilaina ve ny Manamboatra Ny iPhone?
Ahoana ny fametrahana vondrona boky adiresy ao amin'ny Gmail
Nahoana ny fiara Apple no lehibe - ary mahonena - hevitra
Torohevitra momba ny hafatra momba ny hafatra an-tsoratra izay manakana ireo drafitra data
Virtualization ny Leopard sy Snow Leopard Amin'ny fampiasana VMware Fusion
Fitsipika tsotra mba hijerena ny dikan-tenin'ny Microsoft Office izay anananao
Ahoana no hanafoanana ny kaontinao?
Afeno ny Windows Live Messenger ho an'ny iPhone